newBrandAnalytics waxay bilaabeen garaaca wadnaha, Garaadka Bulshada ee waqtiga dhabta ah | Martech Zone
newBrandAnalytics wuxuu bilaabay Pulse, Sirdoonka-Waqtiga-Caqliga Bulshada
Khamiis, Juun 26, 2014 Khamiis, Juun 26, 2014 Douglas Karr
cusubBrandAnalytics (nBA) ayaa bilaabay Pulse, Mashruuc daruur ku saleysan oo ka caawiya macaamiisha sida McDonald's, David Bridal, DICK's Sporting Goods iyo Subway waxay helayaan aragti dhab ah oo ku saabsan mowduucyada isdaba jooga ah iyo wada hadalada saameeya aragtidooda iyo aragtida wax soo saarka.
Garaaca wadnaha waxaa ka mid ah barnaamijka dhageysiga bulshada taas oo soo uruurisa faallooyinka shakhsiga ah iyo wada sheekaysiga, waxay bixisaa xogta isbeddelaysa waxayna u oggolaataa sumaddu inay ku falceliso waqtiga dhabta ah. Garaaca wadnaha wuxuu leeyahay saddex astaamood oo qeexan:
Nidaamka ogaanshaha iyo digniinta hore - Pulse wuxuu si otomaatig ah u soo diraa digniin si loo ogaado dhibaatada iman karta ama wada hadalka bulshada ee togan ka hor intaanay ku faafin; hubinta in lagugu wargeliyo mawduuca xawaareynta iyada oo aan loo baahnayn in gacanta lagu kormeero webigaaga astaantaada quudinta bulshada.
Falanqaynta kororka mugga - Pulse waxay qaadataa aqoonsi mawduuc hal talaabo ah iyada oo tilmaamaysa isbeddellada iyo sharaxaadda natiijooyinka si ay si fudud ula wadaagaan xubnaha kooxda.
Fudud-u-isticmaalka iyo is-dhexgal buuxa - Pulse waa isticmaale-saaxiibtinimo waxayna ku dhex jirtaa soo-saarka nBA-da ee hadda jira, oo ka soo wareegaya sawir bulsheed ballaadhan oo ku saabsan falanqaynta khibrada macaamiisha oo faahfaahsan iyo talooyinka istiraatiijiyadeed ee hawlgalka gudaha.
Pulse waxay bixisaa ogeysiis dhab ah oo ogeysiis ah iyo sharraxaad toos ah oo leh digniino la beddeli karo, la socoshada isbeddelka maalinta ka dambeeya, iyo awoodaha astaamo-goosashada
Pulse waa qayb ka mid ah qaybta 'softwareBrandAnalytics'. nBA's xal dhamaystiran set waxaa ka mid ah Insight, kaas oo bixiya aragti heer-maxali ah iyo maaraynta sumcadda internetka; Faa'iidada, oo diiradda saareysa sirdoonka tartanka bulshada iyo ka faa'iideysiga falanqaynta bulshada si looga adkaado tartamayaashaada; Isku xidh, oo ah barxad istiraatiiji ah oo lagu kalsoonaan karo ka qayb qaadashada khadka tooska ah; iyo Instant, oo bixiya kormeerka arrimaha dhabta ah ee macaamiisha lagu soo wariyay. Pulse ayaa loo heli doonaa noocyada laga bilaabo bisha Luulyo.
Warshadaha oo dhan, ganacsatadu waxay u baahan yihiin barnaamij casriyeysan oo sirdoonka bulshada ah oo awood u leh inay siiso waqtiga dhabta ah, fikradaha waxqabadka leh iyo talooyinka. Pulse waxay awood u siisaa macaamiisheenna inay ka gudbaan dhegeysiga bulshada guud si ay u bixiyaan shaashad bulsho oo deg deg ah iyo jawaabo lagu taliyay, oo loo habeeyay astaantooda. Kristin Muhlner, oo ah agaasimaha guud ee NewBrandAnalytics
Tags: Customerogaanshaha horeNBAcusubbrandanalyticsdigniinta bulshadasirdoonka bulshadakormeerka bulshadanidaamka digniinta bulshadafalanqaynta kororka mugga
6 Khuraafaadka Wadaagga Bulshada
2014: Sannadka Khibradda Macaamiisha